Izibikezelo Zokumaketha zango-2016 | Martech Zone
Kanye ngonyaka ngiphula ibhola elidala le-crystal bese ngihlanganyela izibikezelo ezimbalwa zokumaketha ngamathrendi engicabanga ukuthi azobaluleka kumabhizinisi amancane. Ngonyaka odlule ngabikezela kahle ukwenyuka kwezikhangiso zenhlalo, indima eyandisiwe yokuqukethwe njengethuluzi le-SEO nokuthi umklamo ophendulayo weselula wawungeke usaba ngokuzithandela. Ungafunda konke ukumaketha kwami ​​kuka-2015 Ukubikezela futhi ubone ukuthi ngangiseduze kangakanani. Ngemuva kwalokho funda ukuze ubone izitayela eziphezulu ongazibuka ngo-2016.
Ukuqagela kokuqukethwe, imidiya yezenhlalo kanye nokukhangisa kwe-SEO
Ukusakaza bukhoma komphakathi: Ngezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Periscope, i-Meerkat ne-Facebook Live entsha kulula kunakuqala ukwaba "okwenzekayo manje". Asikho isidingo semishini yevidiyo ebizayo noma izinhlelo zokusebenza zokusakaza bukhoma ezinzima. Konke okudingayo yi-smart phone ne-inthanethi noma ukuxhumana kweselula futhi ungasakaza noma yini, nganoma yisiphi isikhathi. Amandla okusakaza bukhoma emcimbini, ingxoxo neklayenti elijabulayo noma ukuboniswa komkhiqizo osheshayo kusephaketheni lakho. Ividiyo ayisebenziseki kalula kuphela, kodwa izibalo zokuzibandakanya nokwabelana ziphakeme kakhulu kunezithombe ezilula. Uma ufuna ukuqashelwa ngo-2016 uzodinga ividiyo ukwenza lokho kwenzeke.
Thenga MANJE, MANJE, MANJE!: Ngonyaka odlule osomabhizinisi abancane bezwa umfutho wokukhangisa ezinkundleni zokuxhumana njengoba babona ukwehla kokubonakala kwezinto eziphilayo. Ukwenza ukukhangisa kukhange kakhulu, ukwengezwa kwezici ezintsha ze- "thenga manje" ku-Facebook naku-Pinterest kuzoguqula ukukhangisa kwezenhlalo kusuka ekwakhiweni kokuqwashisa kuya ekwakhiweni kokuthengisa. Njengoba lokhu kuqhubeka ngilindele izinkundla zokuxhumana eziningi ezizolandela.
Ukwenza okuqukethwe kwakho kufundwe: Ngonyaka odlule savalelisa kumasu okuxhuma okungahleliwe namasu wokufaka amagama angukhiye. Izindaba ezimnandi - Lokhu kubangele ukushintshela kokuqukethwe njengengqikithi yecebo le-SEO elisebenzayo. Izindaba ezimbi: Ukuqhuma kokuqukethwe kumakhasi e-web kanye nezingosi zokuxhumana sekukwenze kwaba nzima kakhulu kunakuqala ukubonwa. Ngo-2016 izinkampani eziphumelelayo zizogxila kakhulu kumasu azo okusabalalisa, ukuthola okuqukethwe kwazo phambi kwabantu abalungile ngokuxhumana nge-imeyili okubhekiswe kukho kanye namaqembu ezenhlalo azinikele. .
Ukubikezela Kokumaketha Kwewebhu
Imishayo eseceleni yokuvalelisa: Uma sekuyisici esijwayelekile sawo wonke amawebhusayithi, ayaphela ngokushesha ngoba awasebenzi nje ezindaweni ezingamaselula. Ulwazi olubucayi kubha eseceleni luwela ezansi kwekhasi kumadivayisi eselula okubenza bangabi namsebenzi njengekhaya lanoma yiluphi uhlobo lokubizelwa esenzweni.
Idizayini ejwayelekile: Cabanga ngosofa abasezingeni eliphansi. Ungahlela izingcezu zakhe usofa noma isihlalo sothando nesihlalo esihlukile. Ngamathuluzi amaningi wokuqamba (kufaka phakathi i-Divvy by Elegant Themes), abathuthukisi bewebhu bangakha amakhasi empeleni aluchungechunge lwamamojula ahlukene ahlelwe ukuhlangabezana nenhloso ethile. Le ndlela ye-modular ikhulula abaklami bewebhu kusuka kwimikhawulo yetimu ethile. Wonke amakhasi angahluka ngokuphelele. Lindela ukubona ukusetshenziswa okusha kwalawa ma-module ngo-2016.
Akuklanywa kahle kangako: Eminyakeni embalwa edlule, i-minimalism ibuse. Imiklamo elula, ngaphandle kwezithunzi noma ezinye izinto ezinikeze ukujula kwezithombe nobukhulu ngenxa yokuthi zilayishe ngokushesha kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi. Kodwa-ke ubuchwepheshe buyathuthuka futhi womabili ama-Apple kanye nama-Android manje asekela ukwakheka okuguquliwe, okuyisicaba. Njengoba lesi sitayela singena kuselula sizosebenza futhi sesibuyele emuva ekwakhiweni kwewebhu. Angilindeli ukuthi sizobona ukubuyela emathunzini okwehla noma ukubukeka okumanzi okudumile eminyakeni eyishumi eyedlule, kepha singalindela imiklamo ebukeka icebe kancane ngo-2016.
Amadivayisi akhuluma wodwa: Bengicabanga ukuthi ukuthuthela kokumaketha okusebenzisanayo kuzobamba ngokushesha kunalokho ebekwenza ngakho-ke ngizohambisa lesi sibikezelo nge-IoT (i-Intanethi Yezinto) kusuka ngo-2015 kuya ku-2016. I-IoT yizinhlelo ezivumela ukuxhumana phakathi kwamadivayisi kanye / noma phakathi kwamadivayisi kanye abantu. Isibonelo, i-smart electronics eyakhelwe emotweni yakho iyakutshela uma ingcindezi yakho yesondo iphansi noma sekuyisikhathi sokushintsha uwoyela wakho. I-Fitbit yami ivumelanisa ngokuzenzakalela nefoni yami ehlakaniphile engazisa lapho ngisondelene nezinhloso zami zansuku zonke. Uma amadivayisi ahlakaniphile ekwazi ukuthumela izaziso kwamanye amadivayisi kunengqondo kuphela azoqala ukuthumela imilayezo kubathengisi nakubanikezeli bezinsizakalo. Isithando somlilo sakho singaxwayisa uchwepheshe wakho we-HVAC lapho sidinga ukusizakala, noma isiqandisi sakho singahle sihlele kabusha ubisi lapho ishalofu lingenalutho. Ngo-2016 kuzoba nezinhlelo zokusebenza eziningi ezivumela amakhasimende akho ukuthi abhalisele izikhumbuzo nezaziso zazo zonke izinhlobo zemikhiqizo nezinsizakalo
Sihlala sinentshisekelo kumathrendi, ikakhulukazi kubaninimabhizinisi abancane (izinkampani ezinabasebenzi abangaphansi kwekhulu). Uma lokho kuzwakala njengawe, uzothatha imizuzu embalwa ukuqedela inhlolovo yethu yaminyaka yonke?
Tags: marketingamathuluzi wokumaketha